Sehatra lalao: Kivy im Dinika Manonta… | Portal │ Hans Kottke
« mpianatra tetikasa: Sofina lakandrano alalan'ny taonjato tany am-boalohany ny Martineum sy Katharineum…
namboarina Asadian: tsy indray – An Armeniana Passion… »
Sehatra lalao: Kivy im Dinika Manonta…
Indro misy dikan-taona:
Ny dingana dia foana tsy mitondra fanatitra. Hans tonga dia mipetraka eo amin'ny iray
Seza. Toa tena kivy izy.
Rehefa avy antsasaky ny minitra Hanna hafaliana avy amin'ny sehatra
ary heverina Hans.
Hey! Faly mahafantatra anao. Like
Ve ianao rehetra?
Inona izany fanontaniana? Ve ianao manantena
tena valiny, na tokony
Izaho ihany no mangataka anao, Manao ahoana ianao
On, fahagagana iray fotsiny, raha
Fa ianao manantena izany, I
olon-kendry, Salama aho!
Ary, efa. Izany no
Tsy mamaly izany,.
Ny antsasaky ny minitra fahanginana mitranga mitranga. Hanna milentika
eo amin'ny seza faharoa sy heverina Hans.
Moa zavatra mitranga manokana aminao?
Mampijaly ahy ny eritreritro. Ianao
circling toy ny Carousel. I
miantso izany toetra izany foana
Manana hevitra izany faribolana iray
Tsy fantatro. Izany fotsiny mitranga
ary very ny
Matoky tena sy Izahao toetra aho
mampitony, Fa izay tsy
No azoko atao na inona na inona ho anao?
Ekeo ny tenako, araka izay fotsiny
Bin. Kivy fotsiny aho.
Ary izaho miezaka ny hanaiky azy io.
Ketraka? Aho izany
an'i, fa tsy afaka ahy
mampahafantatra, toy izany
Ianao eo hiady aminao sy
very izao ihany ny hery.
Ary miatrika aho safodrorohany
ary amin'ny fifandraisana amin'ny
Izao tontolo izao ho toy ny any ivelany
Asongadin'ny henjana aho
mampatahotra sy I akanjo
zavatra indray. Dia ny torimaso dia
raha ny marina dia tsy ny tsara indrindra.
Ary, Mijery reraka.
Toe-po nitaredretra eo
ny toetrako structure. I
mahafantatra azy ireo nandritra ny fotoana ela sy ny tsy maintsy
foana fototra vaovao
Inona no ataonao amin'ny lafiny iray hafa?
Zavatra telo manan-danja:
1.Fanafody, 2. Fitsaboana
Fepetra sy 3. ny
Toa tena tsara amin'ny…
Fa na inona na inona izany, fa
fotsiny. Ny fanafody
Antidepressants ny psychiatrists no
tena piozila. Ny olon-drehetra
Fihetsiky ny olona amin'ny fomba hafa izany
Fanafody dia tsy maintsy miadana
hotsaraina mampitombo. Ary
miaraka amin'ny voka-dratsin'ny tsy maintsy
voalohany hiatrika. Iray
Mety hahasoa fitsaboana aretin-tsaina,
fa hahita aloha
Mpitsabo. Indraindray azonao atao
miandry antsasaky ny taona. Dia
Tena zava-dehibe, Tsy nahazo aho
milavo lefona ary miezaka ny
Mba hahazoana fandraisana an-tanana manokana. Fa
izany hoe, Miezaka ao amin'ny
Izao tontolo izao any ivelany amin'ny alalan'ny fifandraisana ara-tsosialy
mampahafantatra na dia eo aza ny zava-manahirana.
Mety tsy ho mora…
Fantatro, amin'ny maha-olona afaka aho
fotsiny aho ho takalon'ny amin'ny hafa
Manaporofo ny olona. Afa-tsy eto
I mahazo tamberina tsara
ary ny fankatoavana, I izany
maika ilaina. Fisintahana sy ny
Afa-mandositra ny fifamoivoizana Teste.
Noho izany antony izany eto aho. Miezaka aho
mba hahatakatra anao.
Misaotra anao. Fa ny zava-nitranga dia manana
Nampianatra ahy, fa ny ankamaroan'ny
hihaona tanteraka stupefaction.
Azonao atao fotsiny ny fihetseham-poko
tsy hahafantatra. Fahaketrahana
dia aretina sy ny
lehibe. 15 % ny sarotra
mahomby famonoan-tena. Ao amin'ny mpanao gazety
antsitrika imbetsaka nitatitra
Famonoan-tena ny olona malaza – toy ny
Ohatra, ny mpiandry harato Robert
Mpitondratena – amin'ny, fa rehefa afaka fotoana fohy
dia avy amin'ny vahoaka
Tsaroako. Fa azonao atao
tsy nahay nahasitrana io aretina io?
Raha nijaly ny taolana tapaka
efa, ianao miditra ao fandidiana.
Tao no nanangana ny tapaka sy ny
hiverina an-trano ianao salama.
izay kivy iray,
ianareo avy amin'ny mpitsabo aretin-tsaina sy
dia voatsabo mifanaraka amin'izany. Na dia izany aza
voatery salama no ataonao
tsy an-trano. Ara-tsaina
Aretina matetika manana
mitaiza mazava ho azy. Ary aoka
Matetika no tsy mazava toy ny
Manasokajy tapaka. Noho izany, dia
Fahaketrahana matetika amin'ny tahotra
mifandray ary toy izany koa dia maro
Azoko, fa misy
Maha samy hafa ny ara-batana
sy ny aretin-tsaina dia.
Fa hataoko ahoana no aminao avy ao amin'ny
Misaotra anareo aho noho ny ezaka ataonao.
Angamba azontsika atao ihany koa ny sasany
ho miara-. Fa tsy maintsy
manapa-kevitra, izay ao ny
Toe-tsaina mandeha na tsia.
Inona no toa tsotra, afaka aho
manafotra fotsiny mbola. Mila
manao dingana kely.
Moa efa Mbola hafa
fifandraisana ara-tsosialy, ny ny
Afaka mitondra eritreritra hafa?
Fiainana andavanandro mandeha eo sy tamin'ny ary
dia sarotra ny hahafehy. Fa I
manana fifandraisana amin'ny
Support vondrona, noho ny tahotra
ary ketraka marary ny tenany
miangona. Tsy miresaka
takalon'ny ny olana.
Ny tombony dia, I avy
Equal fiantraikany be haingana
Nanaiky miaraka amin'ny olana sy ny
dia fantatry. The
Tena-fanampiana vondrona tsotra izao ahy
Kraft. Ny hany azoko atao rehetra
Fahazoan-dalana hidirana depressives.
Ok, Hitako, fa miezaka hita
avy amin'ny maizina fihetseham-po
Mivoaka. Ary aho
manandrana, ny toe-javatra
manaiky. Just lazao amiko, Nahoana no
ianao amin'ny fifandraisana amiko amin'ny
Eny àry – Hanao izany aho.
Ankehitriny dia efa ahy tsara fotsiny
vita, fa efa nihaino Ahy.
Ny faniriany ho, rehetra
Olona maro miaraka amin'ny ara-tsaina
Aretina hahalala. Avy eo
izy ireo dia tsy ho nanan intsony ny
Tahotra sy ny fiaraha-miaina
Ho mora kokoa. Na dia
ara-tsosialy mihitsy mila sasany
atao amin'ny ho avy, noho izany
marary saina tsara kokoa
afaka mampiditra. Izany dia manomboka amin'ny
Miasa ny fiainana sy miakatra ao amin'ny
Misaotra anao – Efa nanao izany
Resadresaka nianaranao zavatra…
Lalao an-toerana dia tsy maintsy nitarina. Zavatra hafa mbola mba hapetraka…
Tags: Fahaketrahana, Play
This entry was posted on Wednesday, March 18th, 2015 amin'ny 10:56 amin'ny Hans Kottke ary Filed under 2015, Ankapobeny, Fiaviana. Afaka manaraka ity misy valin-teny ny alalan 'ny RSS 2.0 fahana. Ianao dia afaka mamela ny valiny, na trackback avy amin'ny ny toerana.
21 Users an-tserasera
Tue Jul 16th 16:23:43 UTC 2019